पीएसजीको सानदार गोलले बार्सिलोना पराजित » खबरहरुको एउटै केन्द्र
पीएसजीको सानदार गोलले बार्सिलोना पराजित
बिहीबार, फाल्गुन ५, २०७३ ०९:४० मा प्रकाशित !
पेरिस । एजेन्सी– च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरणको पहिलो लिगमा फ्रान्सेली जाइन्ट पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले पाहुना टोली बार्सिलोनालाई ४–० ले पराजित गर्दै अगिल्लो चरणको सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
दुई ‘बर्थडे ब्वाइ’ अर्जेन्टिनी स्टार एन्जेल डि मारिया र उरुग्वेका एडिन्सन काभानीले पीएसजीलाई जन्मदिनको उपहारका रूपमा महत्वपूर्ण गोल गरेपछि बार्सिलोना स्तब्ध रह्यो । एन्जल डि मारियाको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा पीएसजी पहिलो लिगमा नै फराकिलो नतिजा निकाल्न सफल भयो । डि मारियाले २ गोल गरे भने एडिन्सन काभानीले १ गोल गर्दै बार्सिलोनामाथि धावा बोले अर्को एक गोल जुलियन ड्रक्सलेरको नाममा रह्यो ।
बार्सिलोनाविरुद्ध घरेलु मैदान पार्क देश प्रिन्सेसमा आफ्नो प्रभाव छोड्ने क्रममा पीएसजीले सुरुवातबाट नै एकपछि अर्को राम्रो आक्रमण ग¥यो । परिणामतः उसले पहिलो हाफमा २ र दोस्रो हाफमा थप २ गोल ग¥यो । बार्सिलोनाको दोस्रो हाफको अन्तिम समयको एक उत्कृष्ट प्रहार पोलमा लागेर बाहिरिएपछि गोलअन्तर कम गर्ने महत्वपूर्ण मौका चुकेको थियो ।
भ्यालेन्टाइन डेको उपहारको खोजीमा मैदान आएको फ्रेन्च जोडीलाई पर्याप्त सन्तुष्टि दिन सफल भएको पीएसजीका लागि भने एन्जल डि मारियाले जन्म दिनको शानदार २ गोल उपहार दिए । डि मारिया र काभानी दुवैको फेब्रुअरी १४ मै जन्मदिन परेको थियो । डि मारियाले खेल सुरु भएको १८ मिनेटमै फ्रिकिकमार्फत शानदार गोल गर्दै पीएसजीलाई अग्रता दिलाए । २९औं जन्मदिन मनाएका उनले दोस्रो हाफको ५५ मिनेटमा अर्को गोल गरेका थिए । त्यस्तै, अर्का बर्थडे ब्वाइ काभानीले ७१ मिनेटमा गोल गरेका थिए । ३० वर्षमा प्रवेश गरेका काभानीको च्याम्पियन्स लिगमा सातौं गोल थियो । यसअघि नै पहिलो हाफमा जर्मनीका युवा विंगर जुलियान ड्राक्स्लरले टिमका लागि दोस्रो गोलका रूपमा एक गोल आफ्नो नाममा पारेका थिए ।
अपेक्षाभन्दा निकै फितलो प्रदर्शन गरेको बार्सिलोनाको डिफेन्स र मिड निकै दयनीय रह्यो । उसले पूरा शक्ति खर्च गरे पनि पीएसजीको गोलको वर्षा रोक्न सकेन । उसले तीनैजना स्ट्राइकर लिओनल मेसी, लुइस सुआरेज र नेयमारलाई मैदानमा उतारे पनि उनीहरूले कुनै प्रभाव देखाउन सकेनन ।
बार्सिलोनालाई गत शुक्रबार चोटग्रस्त भएका डिफेन्डर भिडालको अभाव स्पष्टै देखिन्थ्यो । बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगमा ४ गोलको स्पष्ट अन्तरले पराजित भएको यो पहिलो पटक हो । उसले २००६–०७ को सिजन अन्तिमपल्ट च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनल प्रवेश गर्न असफल भएको थियो । यसपटक पनि उसलाई सोही संस्करण नदोहो¥याउनका लागि घरेलु मैदान नउक्याम्पमा हुने खेलमा ५–० को जित अनिवार्य बनेको छ । यद्यपि, स्पेनिस पत्रिकाहरूले बार्सिलोनाको क्वार्टरफाइनलको सम्भावना सकिएको बताएका छन ।
त्यस्तै, मंगलबार राति नै भएको अर्को खेलमा जमर्न क्लब बौरिसिया डर्टमुन्ड बेनिफिकासँग १–० ले पराजित भएको छ । बलियो मानिएको डर्टमुन्डले पेनाल्टीको मौका चुकाउँदा सम्भावित बराबरीबाट विमुख भयो । बेनिफिकाका लागि मिट्रोगोलाले ४८औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो ।
PREVIOUS POST Previous post: ईयूलाई उडान प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मन्त्री महतको आग्रह
NEXT POST Next post: २७ अंकले बढ्यो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, फाल्गुन ५, २०७३ ०९:४०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, फाल्गुन ५, २०७३ ०९:४०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, फाल्गुन ५, २०७३ ०९:४०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, फाल्गुन ५, २०७३ ०९:४०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, फाल्गुन ५, २०७३ ०९:४०